« Hianto-tena tanteraka ny La Passe, izay ekipa faharoa eo amin’ny fifaninanam-pirenena seiseloa, amin’ny fiandohan’ny volana febroary ho avy izao. Eo am-pamaranana ny fifanarahana amina ekipa renioney iray ihany koa izahay amin’izao fotoana ho fanampiana an’ireo solontenantsika ireo », hoy i Ahmad, filohan’ny federasiona malagasin’ny baolin akitra (Fmr). Raha ny tsilian-tsofina dia ny Saint Paul avy any La Réunion no mety ho avy eto amintsika mialoha ny La Passe ary hifandona amin’ny Tana Formation sy Japan Actuel’s.
Raha ny fandaharam-potoanan’ny La Passe FC dia ny 1 febroary izao no ho avy eto amintsika izy ireo, ka ny 3 febroary no hihaona voalohany aminy ny Tana Formation FC (solontenantsika amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona afrikanina). Ny 5 febroary kosa no hifandona amin’ny Japan Actuel’s (solontenantsika amin’ny Champion’s League).
« Fiara lehibe iray sy fiara madinika iray hoentin’izy ireo mivezivezy fotsiny no fandraisana anjarantsika amin’izany fivahinianan’izy ireo izany. Atokan’ny federasiona manontolo ho an’ireo solontenantsika ireo ny vola miditra amin’izany fihaonana izany », hoy ihany i Ahmad. Samy eo am-panomanana tanteraka ny ekipa roa tonta amin’izao fotoana.